Tag: dib u eegista google | Martech Zone
Tag: dib u eegista google
Ku shaqeynta ganacsi guul leh oo meelo badan leh way fududahay… laakiin waa marka aad leedahay istiraatiijiyad suuqgeyn habboon oo maxalli ah! Maanta, ganacsiyada iyo noocyadu waxay leeyihiin fursad ay ku ballaariyaan gaadhitaankooda wixii ka sarreeya macaamiisha maxalliga ah iyada oo ay ugu wacan tahay dijital. Haddii aad tahay milkiile caan ah ama milkiile ganacsi ku leh Mareykanka (ama waddan kale) oo leh istiraatiijiyad sax ah waxaad badeecadahaaga iyo adeegyada aad u bandhigi kartaa macaamiisha mustaqbalka ee adduunka oo dhan. Qiyaas ganacsi meelo badan ku yaal sida
Waxaan dhawaan aqrinayay qoraal ka yimid Joel Comm oo kusaabsan shirkad guureysa Fine Line Relocation Movers. Waa sheeko xasaasi ah oo warshad ay ku badan yihiin khiyaanooyinka iyo farsamooyinka beddelashada. Mar uun baa la i afduubay qof dhaqaajiya oo aan alaabtayda kala soo degi doonin ka dib markii aan u dhaqaaqay qaran ilaa aan ka siiyo lacag kaash ah oo ay ku fuulaan jaranjarada labaad. Duulimaadkii labaad, jidka agtiisa, wuxuu ahaa hal jaranjaro ka badan waxa qandaraaskoodu ahaa
Dib-u-eegis La Xalliyay ama La Bixiyay waa Dib-u-eegis Khatar ah
Arbaco, Juun 20, 2016 Arbaco, Juun 20, 2016 Douglas Karr
Waxaan si adag uga doodnay munaasabad hoggaamineed gobol oo ku saabsan aruurinta dib u eegista ganacsiyada iyo macaamiisha qadka. Doodda inteeda badani waxay ku saabsanayd dib-u-eegista la bixiyay ama macaamiisha abaal-marinta dib u eegista. Anigu ma ihi qareen, markaa waxaan kugula talin lahaa inaad lahadasho taada kahor intaadan i dhageysan. Mawqifka aan ka taagan yahay arintaan waa mid fudud… ha bixin ama ha abaal marin dib u eegista. Waad igu diidi kartaa aniga, laakiin sida warshadaha raadinta dabiiciga ah ay udhaceen qiimeyn been abuur ah,
Haddii aad suuq ka tahay silsiladda makhaayadaha, ama ka badan kuwa xayeysiiska ah, ama silsiladda tafaariiqda, suurtogal kama ahaan kartid inaad ka shaqeysid suuq kasta iyo dhexdhexaad kasta si aad u horumariso goob kasta oo aan lahayn nooc ka mid ah nidaamka. Astaamahaagu inta badan lama arki karo raadinta maxalliga ah, indhoole u ah ka qayb qaadashada macaamiisha maxalliga ah, ma haysato qalab aad ku abuuri karto xayeysiis maxalli ah oo ku habboon, badanaana ma maareeyaan joogitaanka warbaahinta bulshada oo dhammaystiran. Ku darso dadaalka qaar ka mid ah isbeddelada habdhaqanka macaamiisha muhiimka ah: 80%